Abavelisi beLebhu kunye nabanikezeli -eLebhu yaseLebhu yaseChina
I-CON500 yokuqhuba / i-TDS / ityuwa yeMitha-yeBenchtop
Ubunono, ubumbano kunye noyilo lomntu, ukonga indawo. Ukulinganiswa okulula nokukhawulezayo, ukuchaneka ngokukuko kwi-Conductivity, TDS kunye ne-Salinity measurements, ukusebenza ngokulula kuza nokukhanya okuphezulu okuphezulu kwenza isixhobo sibe liqabane elifanelekileyo lophando kwiilebhu, kwimveliso yezityalo nakwizikolo.
Isitshixo esinye sokulinganisa kunye nokuchongwa okuzenzekelayo ukugqiba inkqubo yokulungisa; isikhombisi esibonakalayo esicacileyo nesifundekayo, ukusebenza ngokuchaseneyo nokuphazamiseka, imilinganiselo echanekileyo, ukusebenza ngokulula, kudityaniswe nokukhanya okuphezulu kokukhanyisa emva;
I-DO500 inyibilikile imitha yeoksijini
Isisombululo esiphakamileyo esichithwe ngumhloli weoksijini sinezibonelelo ezininzi kwiinkalo ezahlukeneyo ezinjengamanzi amdaka, i-aquaculture kunye nokubila, njl.
Ukusebenza ngokulula, imisebenzi enamandla, iparameter yokulinganisa epheleleyo, uluhlu olubanzi lokulinganisa;
Uyilo olufutshane nolugqibeleleyo, ukonga indawo, ukuchaneka ngokupheleleyo, ukusebenza ngokulula kuza nokukhanya okuphezulu okukhanyayo. I-DO500 lukhetho lwakho oluqaqambileyo kwizicelo eziqhelekileyo kwiilebhu, kwimveliso yezityalo nakwizikolo.
PH500 PH / ORP / lon / Imitha yeTemp
Iiseti ezine ezinamanqaku ali-11 olwelo oluqhelekileyo, isitshixo esinye sokulinganisa kunye nokuchongwa okuzenzekelayo ukugqiba inkqubo yokulungisa;
Umboniso obonakalayo ocacileyo kunye nokufundekayo, ukusebenza ngokuchaseneyo nokuphazamiseka, imilinganiselo echanekileyo, ukusebenza ngokulula, kudityaniswe nokukhanya okuphezulu kokukhanyisa emva;
Ngokufutshane kunye noyilo olugqibeleleyo, ukugcina indawo, ulungelelwaniso olulula olunamanqaku alinganisiweyo abonisiweyo, ukuchaneka ngokupheleleyo, ukusebenza ngokulula kuza nokukhanya kwangasemva. I-PH500 liqabane lakho elithembekileyo kwizicelo eziqhelekileyo kwiilebhu, kwimveliso yezityalo nakwizikolo.
Isenzi woluvo sokuSebenza kwe-Electromagnetic, Ukuqhuba kwe-TDS Isenzi woluvo, Ph woluvo Electrode, Isilumko seChlorophyll, Isilumko sokuSebenza kweTitanium, Quadrupole Umsizi wokuSebenza woluvo,